Sambom-pizahantany mitety ranomasina: tsy manadino mitsidika an’i Boeny | Région Boeny
Mpizahantany vahiny 80 mahery indray no nentin’ny sambom-pizahantany mitety ranomasina Island Sky, niantsona sy nitsidika teto Mahajanga ny Alahady 19 febroary lasa teo.
Taorian’ny fiantsonan’ny sambom-pizahantany Island Sky tany Nosy Be sy Antsiranana ny 17 sy 18 febroary dia anjaran’i Mahajanga indray no nandray azy ny Alahady teo.
Tsiahivina fa tsy voalohany ity sambo lehibe, vita avy ao Bahamas ity, no efa niantsoana teto toy izao fa efa nandalo teto indroa misesy ny volana martsa 2010
Nizara roa ny vondron’ireo mpizahatany izay nahitana vahiny samihafa toy ny filipiana, aostraliana, sy ny hafa rehefa tonga an-tanety. Ny andiany voalohany nitsidika ny tsena sy nizaha ny maha-tanànam-boninkazo an’i Mahajanga, raha ny faharoa kosa nihazo ny faritra arovana ao Ankarafantsika.
Nandritra izay fotoana izay ankilany, dia nanatontosa fitsidihina ara-panjakana teny ambonin’ity sambo Island Sky ity ny Préfet an’i Mahajanga, Atoa Ravelomahay Lahiniaina Fitiavana, notron’ireo mpisehatry ny fizahantany: ny avy amin’ny biraon’ny Faritra Boeny, ny Foibem-paritry ny fizahantany ary ny Ofisim-paritry ny Fizahantany eto Boeny.
Ireto roa farany moa no nandray an-tànana ny fanetsiketsehana ny fandraisana ara-pomba fanajana sakalava ireo mpizahantany miisa 89 nidina an-tanety.
Niazo an’I Mozambique sy Tanzania ny sambo Island Sky rehefa niainga teto Mahajanga ny alin’iny Alahady iny ihany. Ary mbola hiverina eto indray ny Talata 28 febroary araka ny vaovao nampitain’ny Lehiben’ny sampandraharahan’ny fizahantany avy amin’ny Faritra Boeny, Atoa Rakotonirina Jean Claude izay nisolo-tena ny Lehiben’ny Faritra tamin’ny fitsidihana ny sambo.